Yekutanga-yakasiyana-siyana nyika, akawanda-vanobata Tourism Coalition ndiyo nyeredzi itsva paCOP26 muGlasgow.
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Yekutanga-yakasiyana-siyana nyika, akawanda-vanobata Tourism Coalition ndiyo nyeredzi itsva paCOP26 muGlasgow.
African Tourism Bhodhi • Airlines • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Wtn
World Tourism Organisation (UNWTO) haisati yakokwa.
Chiito, kwete chiziviso chinofanira kunge chiri nzira yekumberi yekutangisa kushanya zvakanaka, uye mubatanidzwa uyu wakagadzirira kupenya, uye mubatanidzwa mutsva une simba.
COP 26 muGlasgow haisi kungowana meseji kupasirese, kuti kushanya kunofanirwa kuve chikamu chemhinduro yekushanduka kwemamiriro ekunze, asi ndicho chiitiko chekutanga ne Chekutanga zvachose-multi-nyika dzakawanda-vabatanidzi coalition in tourism .
Yasvika nguva yekuita, kwete zviziviso.
Ramangwana rine pundutso uye rine hushamwari remamiriro ekunze eWorld Tourism rakangojeka zvakanyanya.
Musangano we2021 weUnited Nations Climate Change urikuenderera mberi panguva ino muGlasgow, UK inogona kunge iri kutanga kwenzira itsva yekushandira pamwe kwepasirese pamwe neruzhinji uye nebazi rakazvimirira.
World Tourism Organisation (UNWTO) inoonekwa nevakawanda seisingashande, isina mari, uye isingatarisirwe zvisizvo ingangove mukumuka.
Zvakatanga nechiratidzo cheSaudi Minister of Tourism, HE Ahmed Aqeel AlKhateeb, uye mumwe wake muSpain HE Reyes Maroto kugovera chiratidzo ichi.
Pakupedzisira, nyika nevatori vechikamu vari kusimuka apo UNWTO nekuda kwekushaikwa kwehutungamiriri yakarara. Ichi chiratidzo cheshanduko yaidiwa kwenguva refu yeindasitiri yekufambisa uye yekushanya, uye pamwe mukana weUNWTO itsva mukugadzira.
Saudi Arabia inozivikanwa nekudyara mabhiriyoni mukusimudzira kushanya kwepasirese. Izvi hazvisi kungoyevedza indasitiri, yakarohwa neCCIDID-19 kweanoda kusvika makore maviri, asi inokurudzira uye inokurudzira.
Nepo World Tourism Organisation (UNWTO) ichisaina zviziviso, mubatanidzwa wekutanga-wenyika dzakawanda-wanda-vatambi mubatanidzwa ndeyekuita.
Hazvina basa kutaura, mari yacho ndeyechokwadi.
Aimbove mutungamiri weMexico uye sachigaro wehupfumi hutsva hwemamiriro ekunze
Saudi Arabia yakaratidza kuve zambuko pakati penyika dzakasimukira nenyika dziri kusimukira. Nhasi makurukota matatu ezvekushanya kubva kuKenya, Jamaica, neSaudi Arabia vari kupinda mudanga muGlasgow pamusoro pekushanduka kwemamiriro ekunze vakati: Iyo Tourism Indasitiri Inoda kuve Chikamu chemhinduro kune njodzi shanduko yemamiriro ekunze
Kugadzira mubatanidzwa mutsva uyu chirongwa chezvikamu zvitatu.
Chiitiko chanhasi chapindwa neHurumende dzeAmerica, UK, Kenya, Jamaica neSaudi Arabia.
Masangano epasi rose atora chikamu nhasi:
Pamusoro pezvo, World Bank neHarvard vakakokwa kuti vapinde mumubatanidzwa.
ICC inomiririra mamiriyoni makumi mana nemashanu eSME. 45% vari munyika dzichiri kusimukira.
Paakabvunzwa kuti masangano madiki akaita seAfrican Tourism Board neWorld Tourism Network achakokwa riini kuti apinde, Gloria Guevara akati izvi zvinogona kukurukurwa nezvedanho 2 kana 3.
Inooneka UNWTO haisati yakokwa.
Gurukota rezvekushanya kweSaudi Arabia Ahmed Alkhateeb
Snr Zvakanaka anoti:
Izvi zviso zvakafanana zvekare, zvino zvinotsigirwa nemari yeSaudi, ichitaura zvinhu zvekare zvekare. Vaive nemukana wekuita, uye havana! Gloria aive mukuru weWTTC uye aikoshesa kukura, kukura, kukura, uku achiisa parutivi nharaunda, panguva yekubata kwake. Ngationei izvi kuti chii - kuedza kwekuda kwevane simba kuti varambe vakabatirira pachirongwa, vachiona nyika ichitsva semhedzisiro yemakore avo vasingaite.